Ubhaliso iiseshoni - IVIDIYO INCOKO. Dating-intanethi!
Njani ukuze ubhalise kwi Dating site
Nje uzalise ifomu emfutshane kwi engundoqo, iphepha, faka idilesi yakho ye email kwaye iphasiwedi ukukhusela Yakho personal data. Sicebisa ukuba ufunda yephepha-mvume sivumelwano kwaye umgaqo-nkqubo wabucalaIsivumelwano uqalisa umkhosi ngomhla ka-ubhaliso. Qala uvavanyo Ukuba ngaba umisela i-password kwaye nqakraza kwi"register for free"iqhosha, uza kukwazi ukuqala ethabatha a personality uvavanyo, apho ukongeza kwi-intanethi Dating iindlela, uza kanjalo nako ukumisela iinkqubo zokukhangela ukuba kufuneka nesakho elizayo iqabane lakho. Uvavanyo banokuthatha phezulu imizuzu embalwa, njengokuba kubhaliwe sijongana bonke personal imibandela ukuba zibalulekile kuba budlelwane.
Iziphumo ingaba ngokusekelwe i-intanethi Dating algorithm ndiyifumane ezilungele candidates kumhla Kuwe. Uyakwazi yima uvavanyo ixesha elithile. Uyakwazi misa uvavanyo nangaliphi na ixesha, ngaphandle kokuba engene data, kwaye kubuya mva.
Ukuqhubeka uvavanyo, ngokulula ungene njengokuba ebhalisiweyo lomsebenzisi kwi-ophezulu ilungelo yembombo engundoqo, iphepha kwaye faka idilesi ye-imeyili kwaye i-password kufuneka linike ngexesha ubhaliso. Uvavanyo waba sele idlule.
Ngoku ubhalisiwe njengoko i-intanethi Dating umsebenzisi. Emva uluphumelele uvavanyo uze uzalise ubhaliso, uza kuhamba yakho personal iphepha kwi-main menu: Apha kwi -"Hlola"tab, i-igqityiwe uluhlu lwakho Dating candidates kwaye imiyalezo esuka kubo ubonakala kwaye iza kuhlaziywa. Khetha"Lam yabucala"tab, uyakwazi imboniselo iziphumo zeemvavanyo uze uzalise ulwazi malunga ngokwakho kwaye yakho uluhlu lwezinto ezikhethwayo. Iziphumo zeemvavanyo kwaye personal data ngamnye umgqatswa unako zijongwe ngokunqakraza ehambelana inkangeleko kwi-uluhlu candidates. Kwi -"Bam search"tab, uyakwazi ukuqwalasela ukukhangela indlela yokukhetha Dating candidates. Kwikona ephezulu-ilungelo yembombo Yakho iphepha, uza kufumana i -"Imimiselo"unxulumano. Apha uyakwazi bonakalisa isimo sakho personal-akhawunti, nikela kwincwadana, kwaye tshintsha ngokwemiqathango yecandelo oluzenzekelayo kweenkonzo izaziso (umzekelo, malunga entsha candidates) Yakho ye email. Zonke i-data kukuthi, kunjalo, iisepha zokucoca sikhuselwe.
Ngolwazi oluthe vetshe malunga data umyalelo wokhuselo, bona i-data umyalelo wokhuselo Ingxelo. Ngenxa real amagama zisetyenziswa kwi Dating site. Ngexesha lokuqala glance, kunokubonakala engaqhelekanga ukuze sibe abazange bavume ukusebenzisa iintlobo.
Ukuba ubhalise kwi Dating site, kufuneka okokuba uvavanyo
I-attractiveness ka elinye igama ukuba wenziwe ukuba yamkelwe kwi-intanethi iqabane lakho ukukhangela sele yayo okuninzi. Ukuba ufuna afikelele kwi-igama, udibaniso uba ezininzi ezinzima kwaye reliable. Kwakhona, kukho akukho preconceptions kwaye assumptions ngathi xa uzama ukubhala. Ngale ndlela, no ubudlelwane phakathi zidaliwe phakathi abasebenzisi, ekwandeni ukuba ukwenza favorable atmosphere nokumisa uqhagamshelane kunye ngamnye enye. Yintoni efanele ukuqwalaselwa xa ukhethe i-password. Khetha i-password ngoko ke ukuba ayinjalo kakhulu elifutshane ilula kwaye ibonelela ukutya umyalelo wokhuselo kuba yakho personal iphepha. Musa ukusebenzisa yakho kuqala kwaye igama lokugqibela, isixeko igama, okanye ezinye iinkcukacha njengoko i-password. Ukongeza, i-password kufuneka na umdlalo wokuqala yinxalenye idilesi ye-imeyili. Phezulu ukhuseleko ngu guaranteed ukuba i-password iqulathe ubuncinane ezintlanu iimpawu kwaye yakhiwe umdibaniso iileta kwaye amanani. Ndenze ntoni ukuba mna bayilibala bam-password? Ukuba unayo zilityelwe i-password yakho, nqakraza kwi iphepha phantsi"Bayilibala-password". Ngoko faka idilesi ye-imeyili ukuba ngaba kusetyenziswa xa nokubhalisa. Uza kuthunyelwa ikhonkco ukutshintsha i-password yakho. Kunokwenzeka izizathu kutheni email asingawo wathumela wakho idilesi ye-imeyili: Xa nokubhalisa, ungenise i-imeyili apha: idilesi ye-email okanye abamele kufakwa kwi -"Spam"ulawulo Yakho yeposi. Nceda khangela umxholo. Kukho akukho izaziso kwi-inkangeleko yakho. Nceda qaphela ukuba awuyi kuyifumana omtsha i-password okanye omtsha ikhonkco ukutshintsha i-password yakho. Nje igama elaziwayo lokuqala free wegrafu kwaye phinda yesibini umhlathi.
Dating abantu Kuba ezinzima Budlelwane nabanye Kwi-Aurangabad
CHATROULETTE UNDRESS QIZ IFLOS video CHAT bepul yuklab olish
esisicwangciso-mibuzo roulette Chatroulette engeminye ividiyo ukuncokola nge-girls free ngaphandle izithintelo ividiyo incoko dating for a ezinzima budlelwane ukuhlangabezana abafazi i-intanethi Dating i-intanethi ividiyo ukuncokola nge-girls ukuhlangabezana a kubekho inkqubela i-intanethi ividiyo incoko Dating ngaphandle ubhaliso